अघोरी बाबाकी श्रीमतीसँग काठमाडौंमा १७ करोडको घर ! भन्छिन्ः अमेरिकामा मासिक १० लाख कमाउँथे, किन ठग्नुपर्‍याे ?
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २८ कात्तिक
‘अघोरी बाबा’ का रूपमा चर्चित विजय केसीकी श्रीमती शारदा पाण्डेले आफूले कुनै लोभलालचमा लागेर बाबासँग बिहे नगरेको बताएकी छिन् ।
पाण्डेमाथि चितवनकी एक युवतीलाई ठगेको आरोप छ । उनी अहिले प्रहरी हिरासतमा छिन् । आफ्नै पूर्व श्रीमान् गोविन्द अधिकारीलाई दाइ हो भन्दै चिनाएर बिहे गराएको र बिहेपछि दाइले अमेरिका लैजाने कथा बुनेको अभियोग पाण्डेमाथि छ । पाण्डेले आफूसँग रकम असुल गरेको भन्दै ती युवतीले प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन् ।
सोही उजुरीका आधारमा गत मंगलबार महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि प्रहरीले ठगी मुद्दामा अदातलबाट तीन दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । हाल पाण्डे बौद्ध प्रहरीको थुनामा छिन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २८, २०७६, १९:१९:००